[Friday, October 13th, 17] :: Xukuumada Somaliland Oo shaaca ka Qaaday in Hay�adaha Amaanku Hakiyeen Mucaawimo Dalka la Keenay
Hargeysa(RH)Wasiirka Diinta & Awqaafta Somaliland Sheekh Khaliil Cabdillahi Axmed ayaa shaaca ka qaaday in xaalado nabadgelyo awgeed loo hakiyey qeybinta Mucaawino kala duwan oo Hay’adda Khadiija dalka Keentay.
Sheekh Khaliil ayaa sheegay in dacwad ka timi Gobolka Sanaag oo la xidhiidhay in Hay’adda Khadiija qaab siyaasadeed uga faa’iidaysanayso mucaawinooyinka ay bixiyaan ku jirto, ka dib markii la ogaaday inay waraaqahii dadku markii ay is-diiwaangeliyeen caddaymaha loo siiyey ka sawirtay (photocopy)goodie qaadatay, waxaanu yidhi,“Runtii ma jirto sifo kaloo loo xanibay mucaawinooyinka Hay’ada Khadiija ka shaqeyso, balse arrimo dhinaca Amaanka ayaa keenay, xilligan aynu ku jirno wakhtiga xasaasiga, ka dib markii dacwad ah in arrimo siyaasadeed looga faa’iidaysanayo lagu soo eedeeyey.
Wasiirka Diinta Sheekh Khaliil ayaa shaaca ka qaaday in Marwo Hoodo Cali Fidhin sheegtay in sababta ay u sawiratay waraaqahii caddaymaha ahayd inay ugu xaqiijiso hay’adda Bisha Case e Imaaraadka inay xaqiiq yihiin dadka ay mucaawinada u doonayso,“Waxay noo sheegtay marwo Hoodo in sababta ay waraaqaha caddaymaha dadka u sawiratay ahayd si ay ugu xaqiijiso, caddeymana uga dhigto Hay’ada Bisha Cas ee Imaaraadka inay jiraan dadka ay mucaawinada u doonayso, xafiiskooda keliyana ay geysay.
Waxuu bulshada iyo dhinacyada eedaha soo jeediyey u soo jeediyey inaan la siyaasadayn arrinkan, marka lagu wada qancana la qeybin doono, waxaanu yidhi,“Wakhtigan dalku xaaladaha doorashada gelayo, ma haboona in arrimo aan xaqiiq ahayn lagu hadlo ama masuuliyiin lagu eedeeyo. Xukuumada waajib baa ka saaran in waxii xaalad abuuraya wakhtigan la xakameeyo. Waa la qeybin doona mucaawinada marka la baadho arrimaha shakiga keenay, madaxda hay’adaha amaanka ayaa bixiyey amarka hakinta qeybinta mucaawinada oo gaadhaysa 28 kontiinar, ka hor intaan natiijadeedu soo bixin.